थाह छ यी ७ चिज घरमा भए हुन्छ वास्तुदोष, हटाउनुस् तुरुन्तै ! - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ०१, २०७६ समय: २०:४९:२५
तपाईं कत्तिको वास्तुशास्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ ? यदि विश्वास गर्नुहुन्छ भने केही चिजहरुका कारण घरमा समस्या सिर्जना भएको हुन्छ । ती चिजहरुमा वास्तुदोष हुने हुँदा जसलाई हटाउनु नै उपयुक्त मानिन्छ । जसले ठूलो समस्या टर्ने विश्वास गरिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा बन्न लागेको काम नबन्ने, आर्थिक संकट बेहोरिरहनुपर्ने र चाहे अनुसारको कामबाट लाभ नहुने जस्ता अप्ठेरा भोगिरहनु भएको छ भने पक्कै वास्तुदोष भएको हुनुपर्छ ।
सीमाक्षेत्रमा फेरि भारतको हस्तक्षेप, कालापानी क्षेत्र नपुगी फर्किए रक्षामन्त्री
७० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई तेस्रो किस्ता प्रदान
जापानले किन बाँड्यो कोरोनासँग लड्न २ हजार आइफोन
मार्गचित्र पनि पस्केको २४ घण्टामै किन आत्तिए प्रधानमन्त्री ओली ?
खरिपाटीका स्थानीय भन्छन्-‘सञ्चारकर्मीको प्रश्नले घरमा बस्नै गाह्रो भो’